💙ရွေးချယ်ခြင်းတွေ မှန်ကန်စေဖို့ဆို 💜 𝗡𝗲𝘄 𝗦𝗸𝗶𝗶𝗻 ကို သုံးပါ 💛 အဆီပြန်တာအတွက်လား ❓ အသားခြောက်တာလား ❓ ပုံမှန်အသားအရေကိုမှ အမဲစက်တွေပျောက်ချင်တာလား ❓ ဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ရွေးချယ်မှုတွေ မှန်ကန်ဖို့ဆို 𝗡𝗲𝘄 𝗦𝗸𝗶𝗶𝗻 𝗙𝗼𝗮𝗺 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻𝘀𝗲𝗿 ကို သုံးပါ။ 💛 အဝါ 𝗩𝗶𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗖 ပုံမှန်အသားအရေရှိသူ သင့်တော်ပြီး တင်းတိပ်မှဲ့ခြောက်ပျောက်ချင်သူများအတွက်ပါ။ 💙 အပြာ 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲𝗻 အသားအရေခြောက်သွေ့သူများ အသားအရေ တင်းရင်းလိုသူတွေအတွက် သင့်တော်ပြီး အစိုဓါတ် ထိန်းသိမ်းလိုသူများအတွက်ပါ။ 💜 ခရမ်း 𝗦𝗮𝗹𝗶𝗰𝘆𝗹𝗶𝗰 𝗔𝗰𝗶𝗱 အဆီပြန် ဝက်ခြံရှိသူများ သင့်တော်ပြီး အဆီဖုပျောက်ကင်းပြီး ဆားဝက်ခြံ ပျောက်ကင်းချင်သူများအတွက်ပါ။ 𝗡𝗲𝘄 𝗦𝗸𝗶𝗶𝗻 𝗙𝗼𝗮𝗺 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻𝘀𝗲𝗿 ရဲ့ မျက်နှာသစ်တွေက မိတ်ကပ်အကြွင်းအကျန်နဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှား သန့်စင်ပေးပြီး အသားအရေကို လန်းဆန်းစေပါတယ်။ New Skiin Foam Cleanser (150g) တစ်ဗူး - ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
??????? ???? မှ စတင်၍ ??? ????? ???? ???????? ရဲ့ ??????? ????? ဇယားတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း ပျော်စရာတွေ အမြဲဖန်တီးပေးတတ်တဲ့ ????? ?????? မှ ဝုန်းနိုင်စိန် ချောချောချေ တွေရဲ့ လက်စွမ်းတွေကြောင့် ချောချောချေတို့ပျော်ရအောင် ??? ????? ???? ???????? ရဲ့ ??????? ????? ကို အောက်ပါဇယားအတိုင်း တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တိုးမြှင့်ထားတဲ့ ??? ????? ???? ???????? ?????? ????? က ??????? ???? မှ စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
☀️ မနက်တိုင်း ညတိုင်း မရှိမဖြစ် ? ☀️ မနက်တိုင်း မရှိလို့ မဖြစ် ? ညတိုင်းလဲ မရှိလို့ မဖြစ်တဲ့ အရာလေးက New Skiin Foam Cleanser နဲ့ 24/7 Tooth Balance ပါ။ ❤️ New Skiin Foam Cleanser မှာ အရောင် (၃) မျိုးရှိလို့ Normal, Oily, Dry Skin နဲ့ Sensitive Skin ပိုင်ရှင်များ ကိုယ့်အသားအရေ အမျိုးအစားအလိုက် ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ ? 24/7 Tooth Balance က သွားများကို ဖြူစင်ဝင်းပပြီး သွားချိုး၊ သွားကျောက် ကင်းစင်တဲ့ သွားများကို ရရှိစေပါတယ်။ သွားဖုံးရောဂါများ၊ သွားပိုးပေါက်ခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ခံတွင်းရနံ့ကို သင်းပျံ့စေပြီး သွားရဲ့အသွင်အပြင်ကို လှပနှစ်လိုဖွယ် ဖြစ်လာစေပါတယ်။ Made in Korea ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ FDA လက်မှတ်ရရှိထားတာဖြစ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ New Skiin Foam Cleanser (150g) တစ်ဗူး - ၁၀,၀၀၀ ကျပ် 24/7 Tooth Balance (180g) တစ်ဘူး – ၇,၅၀၀ ကျပ်
Ma Ei Mon Aung
ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံး ?ခရမ်းလေး ဆားဝက်ခြံ၊ဝက်ခြံအဆီဖုတွေ ခရမ်းလေးနဲ့မှ ပျောက်တော့တယ် ?
အရေးအကြောင်းများ ရှိပြီး အသားအရေတင်းရင်းချင်သူများအတွက် Skin Care ?‍♀️ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်ပြီး အရေအကြောင်းတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေတဲ့ သူလေးတွေအတွက် Day and Night Skin Care Set လေး ပြောပြပေးမယ်နော် ? ဒီ Skin Care Set လေးကို ပုံမှန် သုံးပေးမယ်ဆိုရင် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီး ကျန်းမာနုပျိုတဲ့ အသားအရေကို ရရှိစေပါတယ်။ အသားအရေကို တင်းရင်းလာစေပါတယ်။ ☀️ မနက်ခင်းဆိုရင် New Skiin Foam Cleanser Collagen နဲ့ မျက်နှာသစ်ပြီး Snail Wish Whitening Cream လေးကို အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ ? ညပိုင်းဆိုရင် New Skiin Foam Cleanser Collagen နဲ့ မျက်နှာသစ်ပါ။ မျက်နှာသစ်ပြီးရင် New Skiin Brightening Exfoliation Toner ကို Cotton pad လေးနဲ့ အသုံးပြုပြီးပါက New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream လေး လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင် မနက်ရော ညရော ပြည့်စုံသွားပြီနော် Sensitive အသားအရေပိုင်ရှင်များပါ အသုံးပြုလို့ရပြီး မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားတာဖြစ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ New Skiin Foam Cleanser (150g) တစ်ဗူး - ၉,၅၀၀ ကျပ် Snail Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - ၂၉,၅၀၀ ကျပ် New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - ၁၈,၀၀၀ ကျပ် Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - ၁၉,၅၀၀ ကျပ်
ရင်ခုန်သံချင်း ထပ်တူကြတဲ့ အတွဲလေးက ? သင့်ရဲ့ နေ့စဥ်နေ့တိုင်း အမြဲတမ်း အတူရှိနေမယ့် New Skiin Faom Cleanser နဲ့ Nano Brush လေးပါ ကိုယ့်ရဲ့ ရင်ခုန်သံချင်း ထပ်တူကြတဲ့အတွဲလေး ဖြေသွားဦးနော် ? တင်းတိတ်မှဲ့ခြောက် အသားအရောင်ညီညာချင်သူ၊ အသားဖြူဝင်းချင်သူတွေရဲ့ Vitamin C + Nano Brush အတွဲလေး ? အသားအရေခြောက်သွေ့သူ၊ အသားအရေတင်းရင်းလိုသူ၊ အစိုဓါတ် ထိန်းသိမ်းလိုသူတွေရဲ့ Collagen + Nano Brush အတွဲလေး ? အဆီပြန်တဲ့အသားအရေရှိပြီး ဝက်ခြံထွက်သူ၊ ဆားဝက်ခြံနှင့် အဆီဖု ပျောက်ကင်းလိုသူတွေရဲ့ Salicylic + Nano Brush အတွဲလေး Nano Brush က အရေပြားအတွင်းဆုံး Layer အထိ ထိရောက်စွာ သန့်စင်ပေးပြီး ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်းကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ အရေပြားနှင့် မတည့်ခြင်း လုံးဝမဖြစ်ပေါ်စေတာကြောင့် အသားအရေတိုင်းအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ Nano Brush တစ်ခု ၁၂,၀၀၀ ကျပ် New Skiin Foam Cleanser (150g) တစ်ဗူး - ၉,၅၀၀ ကျပ်